အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၌ မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားပြီးနောက် လူ ၁ ဦးသေဆုံးကာ ၄၀ ဦး ဒဏ်ရာရရှိ - Xinhua News Agency
ဂျကာတာ ၊ ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်(ဆင်ဟွာ)
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အရှေ့ဂျာဗားပြည်နယ်ရှိ Semeru မီးတောင်သည် ဒီဇင်ဘာ ၄ ရက်တွင် ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီး လူ ၁ ဦး သေဆုံးကာ ပျောက်ဆုံးသူ ၂ ဦး နှင့် ဒဏ်ရာရရှိသူ ၄၀ ဦးရှိကြောင်း ဒေသတွင်း တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပူးတွဲပြုလုပ်ခဲ့သည့် virtual သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
)အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အရှေ့ဂျာဗားပြည်နယ် Lumajang ခရိုင်၌ ဒီဇင်ဘာ ၄ ရက်တွင် Semeru မီးတောင်မှ ထွက်ပေါ်လာသည့် မီးခိုးလုံးများအား တွေ့ရစဉ်(BNPB/Handout via Xinhua)ယင်းသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် ခရိုင်အတွင်းရှိ လူနေအိမ်ခြေအများအပြားလည်း ပျက်စီးမှု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း နှင့် ချော်ရည်ပူများကြောင့် ကယ်ဆယ်ရေးသမားများအတွက် ပိတ်မိနေသည့် မိုင်းတွင်းလုပ်သား ၈ ဦးအား ကယ်ဆယ်ရာတွင် အဟန့်အတား ဖြစ်စေခဲ့ကြောင်း ၊ အဆိုပါမိုင်းတွင်းလုပ်သားများသည် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းဖြင့် တာဝန်ရှိသူများအား ကူညီပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်း Lumajang ခရိုင်၏ ဒုတိယ ခရိုင်အကြီးအကဲ Indah Amperawati Masdar က ပြောကြားခဲ့သည်။
)အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အရှေ့ဂျာဗားပြည်နယ် Lumajang ခရိုင်၌ ဒီဇင်ဘာ ၄ ရက်တွင် Semeru မီးတောင်မှ ထွက်ပေါ်လာသည့် မီးခိုးလုံးများအား တွေ့ရစဉ်(BNPB/Handout via Xinhua)
“Curah Kobokan ကျေးရွာက လူနေအိမ်တွေအားလုံး ပျက်စီးသွားပါတယ်။ ချော်ရည်ပူတွေကြောင့် ပိတ်မိနေတဲ့ မိုင်းတွင်းလုပ်သား ၈ ဦးအတွက် အကူအညီ မပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။”ဟု ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
လူတစ်ချို့သည် အပြင်းအထန် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး နီးစပ်ရာဆေးရုံများသို့ အလျင်အမြန်ပို့ဆောင်ခဲ့ကြောင်း ဒုတိယအကြီးအကဲ Indah Amperawati Masdar က ပြောကြားခဲ့သည်။
ဘေးဒဏ်သင့်ကျေးရွာသားများအား ကူညီကယ်ဆယ်ရေးအတွက် ရဟတ်ယာဉ်တစ်စင်း စေလွှတ်ပေးရန် သဘာဝဘေးအန္တရာယ် စီမံခန့်ခွဲမှု နှင့် သက်သာလျော့ပါးရေးအေဂျင်စီအား ဒုတိယခေါင်းဆောင် Indah Amperawati Masdar က တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Lumajang ခရိုင်အကြီးအကဲက ဘေးဒဏ်သင့်ပြည်သူများအား ဘေးလွတ်ရသို့ပြောင်းရွှေ့ကယ်ဆယ်ရန် စစ်သားများ ပိုမိုစေလွှတ်ပေးရေးအတွက် တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် စီမံခန့်ခွဲမှု နှင့် သက်သာလျော့ပါးရေးအေဂျင်စီ၏ ယာယီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Abdul Muhari က ဂျကာတာစံတော်ချိန် ညနေ ၃ နာရီ ၁၀ မိနစ်(ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် နံနက် ၈ နာရီ ၁၀ မိနစ်)တွင် မီးတောင် ထိပ်ဝမှ မီးခိုးပူများ စတင်ပြန့်နှံ့လာခဲ့ကြောင်း စင်တာစောင့်ကြည့်ရေးစခန်းက ထုတ်ပြန်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
မီးတောင်ဆင်ခြေလျောတောင်စောင်း၌ နေထိုင်ကြသည့် ကျေးရွာသားများအား ဘေးလွတ်ရာ ပြောင်းရွှေ့ပေးခြင်းများအား ယခုလုပ်ဆောင်နေကြောင်း နှင့် ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း အများအပြားအား ထူထောင်ထားကြောင်း ဆင်ဟွာက လက်ခံရရှိခဲ့သည့် ကြေညာချက်တွင် ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
#Indonesia #volcano #eruption #အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ #မီးတောင် #ပေါက်ကွဲမှု #ဆင်ဟွာ #Xinhua #Myanmar #xinhuamyanmar
JAKARTA, Dec.4(Xinhua) — Semeru volcano in Indonesia’s East Java province erupted on Saturday, leaving one killed, two missing and 40 others injured,alocal official toldajoint virtual press conference.
The disaster also damaged scores of houses in the district and hot lava hampered rescuers from evacuating eight trapped miners who asked authorities by mobile phones for help, said the Lumajang District’s Deputy Head Indah Amperawati Masdar.
“All the houses in Curah Kobokan village were destroyed. For the eight trapped miners, the help could not be conducted due to the hot lava,” she said.
Separately, the Lumajang District’s head has asked for deploying more soldiers to evacuate and rescue the affected people.
Abdul Muhari, the National Disaster Management and Mitigation Agency’s acting spokesperson said their monitoring post reported that the hot clouds started spreading from the crater of the volcano at 3:10 p.m. Jakarta time (8:10 a.m. GMT).
Photo 1 – Video image released by Indonesia’s National Disaster Management Agency (BNPB) shows Mount Semeru spewing volcanic materials in Lumajang, East Java, Indonesia, Dec. 4, 2021. Semeru volcano in Indonesia’s East Java province erupted on Saturday. (BNPB/Handout via Xinhua)
Photo2– Video image released by Indonesia’s National Disaster Management Agency (BNPB) shows Mount Semeru spewing volcanic materials in Lumajang, East Java, Indonesia, Dec. 4, 2021. Semeru volcano in Indonesia’s East Java province erupted on Saturday. (BNPB/Handout via Xinhua)
Photo3– Photo released by Indonesia’s National Disaster Management Agency (BNPB) shows Mount Semeru spewing volcanic materials in Lumajang, East Java, Indonesia, Dec. 4, 2021. Semeru volcano in Indonesia’s East Java province erupted on Saturday. (BNPB/Handout via Xinhua)